ဖတ်ရသူတွေ ရင်ထဲ မှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေ တဲ့ ကွယ်လွန် သူ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် အတွက် G FATT ရဲ့ ဆုတောင်းစကားလေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဖတ်ရသူတွေ ရင်ထဲ မှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေ တဲ့ ကွယ်လွန် သူ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် အတွက် G FATT ရဲ့ ဆုတောင်းစကားလေး
ဖတ်ရသူတွေ ရင်ထဲ မှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေ တဲ့ ကွယ်လွန် သူ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် အတွက် G FATT ရဲ့ ဆုတောင်းစကားလေး
By Ga MonePosted on February 21, 2021
ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တွေ ကတော့ လက်ရှိ မြန်မာ့ ပြည်တွင်းရေး အတွက် လှုပ်ရှားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ် အဆိုတော် G Fatt ကလည်း လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို ဖမ်းစီးထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ငြိမ်း ချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် သပြေကုန်းမှာ ဆန္ဒပြရင်း ဦးခေါင်းကို သေနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်သွားတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွား ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး G Fatt က သူ့ရဲ့ညီမအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်အတွက် အခုလိုပဲ ဆုတောင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
“ညီမလေးရေ သံသရာက မလွတ်သရွေ့ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ လူပြန် မဝင်စားပါစေ နဲ့ေ တော့ကွယ် . အကိုတို့ ညီမလေးကို အာဇာနည်အဖြစ် လေးစားဂုဏ်ပြုနေမှာပါ ညီမလေးက ၁၉နှစ်တဲ့..ဘဝမှာ ကိုယ်ရူးသွပ်ချင်ရာကို တစ်စိုက်မက်မက်ရူးသွပ်လို့ရတဲ့အရွယ်ပေါ့ကွယ်ကောင်းရာ ဘုံဘဝမှာ ရောက်ရှိ နားခိုပါစေကွယ်။ အကိုပြုဖူးသမျှ ကုသိုလ်တွေ အမျှပါကွယ် မိသားစု နဲ့ထပ်တူကြေကွဲရပါတယ် .. ညီမလေး အော်ဟစ်တောင်းတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ၊ သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစု လွတ်မြောက်ရေး အစ်ကိုတို့ ဆက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုသွားမယ်ညီမလေးရေ ..”ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
G Fatt ကတော့ ကွယ်လွန်သူ လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် အတွက် ဆုတောင်း ပေးထား တဲ့ ဆုတောင်း စကားလေးကတော့ ဖတ်ရသူတွေရင်ထဲ မှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေတာ အမှန်ပါပဲ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
Source: G Fatt’s fb
ပရိသတ္ေတြခ်စ္တဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ေတြ ကေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းေရး အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ အဆိုေတာ္ G Fatt ကလည္း လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရကို ဖမ္းစီးထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။မေန႔က ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းမွာ ဆႏၵျပရင္း ဦးေခါင္းကို ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္သြားတဲ့ ျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္တစ္ေယာက္ ကြယ္လြန္သြား ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး G Fatt က သူ႔ရဲ႕ညီမအ႐ြယ္သာရွိေသးတဲ့ ျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္အတြက္ အခုလိုပဲ ဆုေတာင္းေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
“ညီမေလးေရ သံသရာက မလြတ္သေ႐ြ႕ ဒီလိုႏိုင္ငံမွာ လူျပန္ မဝင္စားပါေစ နဲ႔ေ ေတာ့ကြယ္ . အကိုတို႔ ညီမေလးကို အာဇာနည္အျဖစ္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳေနမွာပါ ညီမေလးက ၁၉ႏွစ္တဲ့..ဘဝမွာ ကိုယ္႐ူးသြပ္ခ်င္ရာကို တစ္စိုက္မက္မက္႐ူးသြပ္လို႔ရတဲ့အ႐ြယ္ေပါ့ကြယ္ေကာင္းရာ ဘုံဘဝမွာ ေရာက္ရွိ နားခိုပါေစကြယ္။ အကိုျပဳဖူးသမွ် ကုသိုလ္ေတြ အမွ်ပါကြယ္ မိသားစု နဲ႔ထပ္တူေၾကကြဲရပါတယ္ .. ညီမေလး ေအာ္ဟစ္ေတာင္းတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၊ သမၼတႀကီးနဲ႔ အေမစု လြတ္ေျမာက္ေရး အစ္ကိုတို႔ ဆက္တိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုသြားမယ္ညီမေလးေရ ..”ဆိုၿပီး ဆုေတာင္းေပးထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
G Fatt ကေတာ့ ကြယ္လြန္သူ ေလး ျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္ အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးထား တဲ့ ဆုေတာင္း စကားေလးကေတာ့ ဖတ္ရသူေတြရင္ထဲ မွာပါ စို႔နစ္ၿပီး ဝမ္းနည္းသြားေစတာ အမွန္ပါပဲ။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုကၸါတယ္ေနာ္။
Previous post ပြည်သူ ဘက်က ဝင်ပါချင် ပေမယ့် ဘယ်လို နေနေ အကောင်းပြော မခံရတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ခံစားချက်ကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြောပြလာတဲ့ TEDDY
Next post ဘယ်သူ လာ ဖမ်းဖမ်း CDM ဆက် လုပ် ကြပါ (သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး)